Rapidshare Free User များအတွက်... — MYSTERY ZILLION
Rapidshare Free User များအတွက်...
January 2009 edited July 2009 in Rapidshare Account
MZ မှ ဂုရုများ Rapidshare Free User များအတွက် အလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်အောင် Premium User များမှ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်ပါသလဲ။ Premium Account ၀ယ်ထားမိလျက်သားဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍အကြံပေးစေလိုပါတယ်။
rs ကသေချာတော့မသုံးတတ်ဘူး ဘယ်လိုကြီးလဲသိဘူး :2:
rapidshare premium account တွင် Traffic share ဆိုတာပါပါတယ်. premium user က upload တင်ပေးထားသောဖိုင်များကို Traffic share Download ပေးထားလျှင် free user မှအလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရပါတယ်။ premium account တွင် Traffic share အတွက် 5G ပေးထားပါတယ်။
aungoo wrote: »
အော် ဒါဆို premium account သုံးနေတဲ့ user က upload တင်ပေးရတာပေါ့
ဒါဆို ကျနော်တို.တိုက်ရိုက်၀င်ပီး ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကော
ဟီးး ကျနော်မေးတာ နားလည်ပါ့မလားသိ၀ူး
ဒီလို ဒီလို အဲ့ဒီ premium user ဆိုဒါကတင်တယ်ထား သူတင်တဲ့ Traffic Share ကိုပြောပြရမှာလား
ဟီးး ကျနော်ကေ၀းတယ်(ဘာမှကိုမသိတာအမှန်က) အဲ့တာလေး တစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြပေးနော် :77::77::77:
Topic ချော်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ညာ post မတင်ချင်လို.ဒီကိစ္စလေးကို
အမ်ဇက်မှာလေ ပို.စ်လေးတင်ပီး မေးရင် အရင်လို.
ဟုတ်တယ်... အရင်ကဆို တက်တဲ့သူကော မတက်တဲ့လူကော မေးတာနဲ.
အလုအရက်ကိုဖြေကြတာပဲ မော်မော်တွေမင်မင်တွေဆိုလဲ ဖြေကြပါ့
အခုကြတော့ သိပ်ပီးဖြေကျတာ ဆွေးနွေးတာလဲမတွေ.ဘူး :2::2:
ဘာလို.လဲဟင် ..သားက မသိလို.မေးတာပါအခု :106::106:
နောက်မှ၀င်လာတဲ့လူတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာလား မဖြစ်နိုင် :D
ကို စေတန်ကလဲနေမကောင်းတော့ မပွားနိုင်ဘူး
အားရပါးရအရင်လိုဖြေပေးကြပါလို.မော်မော်မင်မင်ဂုရုမှအစ မွေးစကလေးအဆုံး :77::77:
RS premium account ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့ ကိုယ့်မှာလဲ site တခုရှိတယ်ဆိုရင် Rapidleech software ကို ကိုယ့်ဆိုက်မှာ install လုပ်ပြီးရင် အဲဒီ site သုံးပြီး ဘန်းကျော်က ဘော်ဘော်တွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ ကိုစိန်ကုလား လုပ်သလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ bandwidth အခက်အခဲကြောင့် တချိန်ထည်း လူအများကြီး တပြိုင်တည်း ဆွဲရင် ကိုယ့်ဆိုက်ပါအဆစ်ပါသွားမယ်။ ပြီးတော့ RS ကအရင်ကလို တနေ့ bandwidth က 10 GB မပေးတော့ပဲ 2.6 GB ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။ ကိုယ့်အကောင့်ကို သူများမျှပေးတာလဲ သိပ်တော့မကောင်းပြန်ဘူး။ အရင်က ကျေးဇူးရှင် ဂူဂူးစတား အဲဒီလိုမျှပေးလို့ သူ့အကောင့် အချိန်မပြည့်ပဲ အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ထင်တယ်။ လူအများကြီးတော့ တပြိုင်တည်း ကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကိုဒီဘီအေတို့ က ို Exiter တို့လုပ်ပေးသလို လိုအပ်တဲ့လူရှိရင် upload site ပြောင်းပြီးပြန်တင်ပေးဖို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုလုပ်နိုင်ဖို့က ကိုယ့်ရဲ့ upload speed မြင့်ဖို့လဲလိုတာပေါ့။ ကျနော်ဆိုရင် RS ကနေ free user နဲ့ download ဆွဲရင် 150KB လောက်ရတယ်။ upload ပြန်တင်ပေးရင် အလွန်ဆုံး 17KB ထက်ကိုမပိုဘူး။ တခါက Zshare ကနေတင်တာ ပြောရင်တောင် ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ 1KB နဲ့သွားနေတာ။ ကျနော့သဘောဆိုရင် ကျနော်သာ ဘန်းကျော်က ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ download ဆွဲတာကိုရှောင်တယ်။ CD ဆိုင်ကိုပဲ အဓိကအားကိုးတယ်။ ဒါပေမဲ့ Internet တနေကုန်သုံးလို့ရတဲ့လူကြ download ဆွဲရမှ ကျေနပ်မှာ။ အဲဒါဆို အကောင်းဆုံးက အသိတွေပေါင်းပြီး Rapidshare account ကိုမျှဝယ်လိုက်ပေါ့။ CD ဝယ်တာနဲ့ download ဆွဲတာ ဘယ်ဟာ cost effective ဖြစ်မလဲ ကိုယ့်ဟာ့ကိုယ်တွက်ကြည့်ရမှာ။ ပြီးတော့ ကဘာမှာ upload တင်ထားတဲ့ file တွေရဲ့ 90% က Rapidshare မှာတင်ထားတာ။ (Rapidshare.com is currently the 12th most visited website globally.) ကျနော်ဆိုရင် RS ကနေ free user နဲ့ download ဆွဲနေတာပဲ။ တခါတလေဆွဲမရရင် 10 mins စောင့်ရင်ပြန်ရတယ်။ RS Premium link Generator ကနေဆွဲရင် ပိုတောင်မြန်သေး။ Zshare ဆိုရင်ဝေးဝေးကရှောင်တယ်။ download speed 20KB ပဲရှိလို့။ upload speed ကြတော့ လိပ်နဲ့ပက်ကျိပေါင်းထားသလားမှတ်ရတယ်။ ဘန်းကျော်က ဘော်ဘော်တွေဆွဲလို့အဆင်မပြေရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဇလုံကြီးက ပေါချောင်ကောင်းလုပ်ထားတာကိုး။
ဒါကတော့ Rapidleech အကြောင်း
premium user က upload တင်တယ်ဆိုရင်...သူ့မှာ normal download တို့ traffic share download ... တို့ကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ပေးနိုင်တယ်ဗျာ၊ Traffic share download ကိုပေးထားရင် ကိုဇေယျာထက်ကတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ရပြီ။ အောက်ကလင့်ကိုအစမ်းဒေါင်းကြည့်ဗျာ...
rs ကနေ ဒေါင်းတာဒီတခါပဲကောင်းကောင်းအဆင်ပြေဖူးသေးတယ်...:D
rs premium user များ...traffic share download တွေပေးကြပါစေဗျား... :63::63::63:
i hve some of Rapidshare tools ...
if u r free user , u should test RS softwares ...
eg.. Rapidshare Hacker , Rapidshare Time Resetter , Rapidshare Premium Account Checker , Rapidshare - The Way You Like It , Rapidshare Checker , Rapidshare Decoder , and .........so on .....
hey ... now i m using " RapidCrazy software " ... it is working (Downloading ) from Rapidshare. com , Rapidshare.de and Megaupload.net.
i want to help u .. but i m so afraid to Upload files ..:((
plz test it ..
" RapidShare Hacker "
password :: www.cyberwarez.info
"RapidCheck Premium accounts.rar "
" Rapidshare Search.rar "
" Grabber 1_4_9 .rar "
PS :: : u should use .. " Down them all " add-on ..and " Rapidshare Happy Hour Checker " add- on .... if u r Mozilla user . !!!
all of the above links are gone:2:
could you pls reupload in rapidshare?
as for me, i used RS Grabber (in 2007) and then, i used rapidshare hacker and in sometimes, i use rscracker (to crack the rs accounts and it needsaword list generator) and in sometimes, i got by social engineering which means that i uploaded the fake login pages on the net:P
(now, i just using the premium link generators coz these are the easiest way to kick out the limitations of rapidshare:D)
sori .. i 'll test my links ...
okie B .. i'll reupload my files .. :77:
hey B ... Check it
Rapidshare Check Premium Accounts
want to buy rs account
if he/she live in yangon.Ph...address...plz...thanks...
you can see rapidshare free download
i test it ok
please learn to at http://www.myanmaritresource.info.